Baahin: Sabti, Apr 23, Weriye Axmed Sh. Maxamed ~ Daljir ~ Bossaso. “Waxaa jira dad curyaaminaya amniga iyo dhaqaalaha Puntland, sidoo kale waxaa jirta abaar aad u daran ee aan u kacno” C/Sammed Cali Shire … Gen. Khayr, wasiirka ammaanka ee Puntland oo ka codsaday shacabka in lagala shaqeeyo adkaynta amniga, sheegayna in rag loo qabtay dilkii xalay ka dhacay Galkacyo; Odayaal ay isku-hayb yihiin eedaysanayaasha oo sheegay in aanay lug ku lahayn dilalka loo haysto … Al-shabaab oo la wareegay Dhuusamareeb, Galgaduud; Ahlu-sunna oo isku uruursanaya duleedka magaalada Dhuusamareeb … – Radio Daljir
Baahin: Sabti, Apr 23, Weriye Axmed Sh. Maxamed ~ Daljir ~ Bossaso. “Waxaa jira dad curyaaminaya amniga iyo dhaqaalaha Puntland, sidoo kale waxaa jirta abaar aad u daran ee aan u kacno” C/Sammed Cali Shire … Gen. Khayr, wasiirka ammaanka ee Puntland oo ka codsaday shacabka in lagala shaqeeyo adkaynta amniga, sheegayna in rag loo qabtay dilkii xalay ka dhacay Galkacyo; Odayaal ay isku-hayb yihiin eedaysanayaasha oo sheegay in aanay lug ku lahayn dilalka loo haysto … Al-shabaab oo la wareegay Dhuusamareeb, Galgaduud; Ahlu-sunna oo isku uruursanaya duleedka magaalada Dhuusamareeb …
Abriil 23, 2011 12:00 b 0
Maamulkii Mudug heer gobol iyo heer dagmo oo lakala diray; Maxamud C/Raxman Cuuke oo noqonaya Guddoomiyaha gobolka iyo Duqa Galkacyo.